Astaamaha ninka qarnigii XXI, sidee yahay? | Ragga Stylish
Moodooyin isku dhafan ayaa cadaadis saaraya ninka qarniga XNUMXaad. Miyay tahay u adeegi kara fikirka ku saleysan jinsiga ragga iyo dumarka? Ka waran doorarka cusub ee ka imanaya dheddig-nimada iyo sheegashooyinkeeda la xiriira jinsiga?
Marka xigta, waxaan arki doonaa astaamaha ugu waaweyn ee ninka qarniga XNUMXaad
1 Ninka qarniga XNUMXaad ee isku-dhafka fikradaha jinsiga iyo ragga
2 Hadhaagii weynaa ee ragannimo qarnigan
Ninka qarniga XNUMXaad ee isku-dhafka fikradaha jinsiga iyo ragga
Aqoonyahanada cilmu-nafsiga, cilmu-nafsiga, siyaasiyiinta, haweenka, saxaafadda, waxay ku daadinayaan deegaanka iyagoo wata astaamo ku saabsan waxa uu noqonayo ninku. Qof kastaa wuxuu dareemayaa inuu xaq u leeyahay inuu qeexo. Sidee buu ninku ugu nool yahay xaqiiqadan isaga shuruud ku xidhay?
1- In kastoo machismo buuxda ayaa u janjeera in la ciribtiro, mabaadi'deeda badan ayaa wali bulshada ku sii jira. Fikradda ah inuu yahay ninka reerka lacag siiya, tusaale ahaan, weli maskax badan baa ku dheggan. Oo culayska ninku waa mid culus.
2- Wuxuu dareemayaa inay tahay inuu sii daayo shucuurtiisa, laakiin wuu ka warwareegaa. "Raggu ma ooyaan" waa horudhac weli madaxiisa maraya.
3- Wuxuu rabaa inuu qabto shaqooyinka guriga, laakiin mararka qaarkood wuxuu dareemaa in tani aysan "u ahayn ragga." Iyo cabsi kaftan.
4- Soo ogow fursadaha qurxinta ee haweenku u isticmaali jireen oo keliya. Booqo xarumaha dhammaystiran, timo jarayaasha, dukaamada wax ka baxa. Waxay si xishood leh u isticmaashaa qurxinta iyo kareemada daryeelka maqaarka. Si kastaba ha noqotee, isagu kuma faraxsana in lagu arko howlahaas.
5- Isla mar ahaantaana, waxay haysaa sawirka dhaqameed ee jirka murqaha oo leh muuqaal xoogaa muuqaal ah, oo caan ku ah superheroes.. Waqti fiican ku qaad jimicsiga.
Hadhaagii weynaa ee ragannimo qarnigan
Isku dhafka isbeddellada ayaa soo saaray taxaneyaal-dhaqameedyo taxane ah oo taageeraya siyaabo kala duwan oo loo fahmo ragga. Waa in loo furaa si loo fahmo in wax waliba socdaan, oo ka mid ah xadka bulshada ay dejiso. Nin waliba wuxuu raadsan doonaa qaabkiisa, midka isaga ka dhigaya inuu wanaag dareemayo. Wuxuu ka soo saari doonaa astaamahaas uu sida raaxada ugu nool yahay.
Caqabada weyn ee haysata ninka qarniga XNUMXaad ayaa ah inuu si dhab ah u noolaado oo uu helo isku dheelitirnaan ku dhisan fikradaha weli ku sii jira. Bulsho mugdi gelisa xadka waxa laga filayo ragga iyo dumarka, waa deegaan jecel
Ilaha Sawirka: NegroWhite / Idealista
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Waa sidee ninki qarniga XNUMXaad
Maxay Sabab u tahay in Dhididku khafiifa yahay Maalgashi Guga oo Weyn